လေဝင်လေထွက်များအတွက်စံခရုပိုက်ပိုက်လုံးတံတောင်ဆစ် China Manufacturer
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: လေဝင်လေထွက်အဘို့အလိမ်တံတောင်ဆစ်,စံခရုပိုက်လေပိုက်လုံး,Helix ပိုက်လုံးလေပြွန်တံတောင်ဆစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > လေဝင်လေထွက်ခရု Tube > လေဝင်လေထွက်များအတွက်စံခရုပိုက်ပိုက်လုံးတံတောင်ဆစ်
အဆိုပါလိမ်လေကြောင်းပြွန်တရုတ်နှင့်တရုတ်အကြားလေကြောင်းစောင်ရေများအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်, လေဝင်လေထွက်နှင့်လေဝင်လေထွက်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဆုံးကျယ်ပြန့်ဈေးကွက်ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ကြောင်လိမ်လေတိုက်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
သွပ်ရည်စိမ်လိမ်လေကြောင်းပိုက်, သံမဏိလိမ်လေကြောင်းပြွန်နှင့်ပေါင်းစပ်လိမ်လေကြောင်းပြွန်: အဆိုပါလိမ်လေတိုက်ပိုက်စျေးကွက်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏ပစ္စည်းနှင့်အညီသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ သူတို့တွင်သည်သံမဏိလေကြောင်းပြွန်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် application ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။
ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေလိမ်ပိုက်စာရွက်များအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနေကြသည်။ သွပ်ရည်စိမ်စတီးပန်းကန်၏လိမ်ပြွန်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးသံမဏိလိမ်ပြွန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်စျေးနှုန်းသာ 2/3 သို့မဟုတ်သံမဏိလေကြောင်းပြွန်ထက်ပင်နိမ့်သည်။ Composite လိမ်လေကြောင်းပြွန်လေ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါသည်နှင့်လေပိုက်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းမြင့်မားတဲ့မဟုတ်နေရာများအတွက်အသုံးပြုသည်။
သံစာရွက်များအမျိုးမျိုးသော enviroments မှာဓာတုတုံ့ပြန်မှုမှကျရောက်နေတဲ့ကြောင့်, သူတို့ကချေးများနှင့်သံချေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွပ်ခဲခြောက်သွေ့သောလေထုထဲမှာပြောင်းလဲစေပါသည်။ စိုထိုင်းသောလေထုထဲတွင်တစ်ဦးသိပ်သည်းဇင့်ကာဗွန်နိတ်ရုပ်ရှင်ဇင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါလိမ်ပြွန်အဓိကအားသံစာရွက်ပေါ်တစ်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ဍသောလေတိုက်ပိုက်၏သံစာရွက်ပေါ်တွင်ဇင့်နှင့်အတူချထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း, passive ဆိုးသို့မဟုတ်သိသိသာသာယင်း၏အကာအကွယ်များနှင့်အလှဆင်ဂုဏ်သတ္တိများတိုးတက်စေနိုင်သည့်အလင်းထိန်းအေးဂျင့်နှင့်အတူ coated ဖြစ်ပါတယ်။
1, ချောမွေ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မရှိ, ဇင့်အကျိတ်, burr, ငွေအဖြူ;
2. အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုအချက်များကိုအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
5. အထူ Control ဖြစ်ပါတယ် 5-107 မီတာအတွင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
6 မရှိဟိုက်ဒရိုဂျင် embrittlement မျှအပူချိန်အန္တရာယ်များ, ပစ္စည်းများများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမပြောင်းလဲကျန်ကြွင်းသောသေချာနိုင်ပါတယ်။
7. ဒါဟာဖြစ်စဉ်ကို galvanizing ပူသို့ကျဆင်းလာနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
8, ကောင်းသောချေးခုခံ, 240 နာရီကြာကြားနေဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်။
10, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, အထူးပြွန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်။
ရိုးရာအဖြူရောင်သံပိုက်များခေါက်ကို manual နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, လိမ်လေကြောင်းပြွန်များ၏ယန္တရားကိုအောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:
(2) အစွမ်းသတ္တိ, မာကျောမှုနှစ်ခုလုံးကောင်းပါတယ်။
(3) လေဝင်လေထွက်ခုခံ, လေဝင်လေထွက်ဆူညံသံအသေးအသေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပိုက်စတုရန်းပြွန်ထက် သာ. ကောင်း၏။
(4) installation ကိုအဆင်ပြေပြီး connection ကိုအချက်များကိုအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : လေဝင်လေထွက်ခရု Tube
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: လေဝင်လေထွက်အဘို့အလိမ်တံတောင်ဆစ် , စံခရုပိုက်လေပိုက်လုံး , Helix ပိုက်လုံးလေပြွန်တံတောင်ဆစ် , လေဝင်လေထွက်အဘို့အလိမ်ပိုက်အာဏာသိမ်းမှု , ပူးတွဲများအတွက်သွပ်ရည်စိမ်ပြားတံတောင်ဆစ် , အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပိုက်တံတောင်ဆစ် , မိုင်းအဘို့မြေမှုန့်ကောက်ခံရေး , လေဝင်လေထွက် Fittings ခရုပိုက်လုံး